Fiberglass Geogrid - China Xi'an Homey Teknolojia
Description Ny fiberglass ho toy ny fitaovana, nolaniana iray vita amin'ny fanenomana dingan'ny Network rafitra ara-nofo, mba hiarovana ny fiberglass sy hanatsarana ny fampisehoana ankapobeny, amin'ny alalan'ny dingana coating manokana geotextile mitambatra mandrafitra ny fitaovana. Ny fiberglass geogrid dia vaovao tsara karazana geotextile izay mampitombo ny lampivato sy ny roadbed. Ny zavatra atao kofehy voatenona fiberglass tenona sy mifono. Manana hery tensile avo, elongation ambany, ambony lasitike modulus tsara R ...
Ny fiberglass toy ny fitaovana, nolaniana iray vita amin'ny fanenomana dingan'ny Network rafitra ara-nofo, mba hiarovana ny fiberglass sy hanatsarana ny fampisehoana ankapobeny, amin'ny alalan'ny dingana coating manokana geotextile mitambatra mandrafitra ny fitaovana.
Ny fiberglass geogrid dia vaovao tsara karazana geotextile izay mampitombo ny lampivato sy ny roadbed. Ny zavatra atao kofehy voatenona fiberglass tenona sy mifono. Manana hery tensile avo, elongation ambany, ambony lasitike modulus tsara fanoherana ny avo sy iva hafanana fampisehoana sns, rehefa ambonin'ny coating fitsaboana, miaraka amin'ny tsara alkali fanoherana sy ny fahanterana fanoherana, be mpampiasa amin'ny asfalta rarivato, simenitra mivaingana lampivato sy ny roadbed hanatsara; na mafy lalana rarivato sy malefaka azo ampiharina, raha oharina amin'ny lalana ny nentim-paharazana dia afaka mampihena ny vola lany, hanitatra ny fiainana, hisorohana ny lalana fisaintsainana triatra. Fiberglass Geogrid Azo ampiasaina amin'ny lalamby, seranam-piaramanidina, ny rano conservancy, tohodrano sy ny hafa hanatsara sy malefaka tany roadbed hanatsara.
1) High tensile hery, ambany elongation
2) Tsy misy maharitra mikisaka
3) mafana fahamarinan-toerana
4) fifampifanarahana mifamadika amin'ny asfalta mifangaro
5) Ara-batana sy simika fahamarinan-toerana
6) aggregate fampidirana sy ny Fepetra
Mety ho be mpampiasa amin'ny fikojakojana ny simenitra taloha lampivato, seranam-piaramanidina fiaingana, tohodrano, hantsana fiarovana, lalana sy tetezana rarivato fanamafisana fanodinana sy ny faritra injeniera.
Famaritana sy ny masontsivana
Manaraka: polyester geogrid
Basalt Fibre Hamafiso Geogrid
Godorao mifono Fiberglass Geogrid
Godorao mifono Fiberglass Geogrids
Fibre Glass Building Geogrid
Fiberglass lalana mivily Geogrid
Fiberglass harato Geogrid
Glass Fibre tara Geogrid
P Fiberglass polyester Geogrid
Tensile Hery Fiberglass Geogrid
Ba nataony ho tenany Fiberglass Geogrid